Homeसमाचारकोरियाली गायक साइको ‘खाङनाम स्टाइल’ले राख्यो रेकर्ड, ४ अर्बपटक हेरियो युट्युबमा (भिडियो हे’र्नुहोस)
March 26, 2021 admin समाचार 3201
दक्षिण को’रियाली गायक पार्क छे साङ उर्फ साइको गीत ‘खाङनाम स्टाइल’ ले युटुबमा नयाँ रेकर्ड ब’नाएको छ। यो गीत के-पप गायकहरुले गाएको गीतहरुमध्ये सर्बा’धिक हेरिएको गीत हुन सफल भएको छ। यो गीत युटुबमा ४ अर्बपटक हेरिस’किएको छ। साइको गीत ‘खाङ’नाम स्टाइल’ सन २०१२ मा विश्व चर्चित हुन सफल भएको थियो।
गायक तथा र्यापर साइले स्थाप’ना तथा नेतृत्व गरिरहेको म्युजिक कम्पनी ‘पि नेशन’ का अनुसार उनको यो गीत रिलिज भएको ८ बर्ष ७ महिनापछि आइ’तबार के पप गायकहरुमध्येको युट्युबमा सर्बाधिक हेरिएको गीतको रेकर्ड राख्न सफ’ल भएको हो।
“यो गीत मात्र रमा’इलोका लागि बनाइएको थियो तर यसले यति ठूलो सफलता पायो।” र्यापर साइले आइतबार कोरि’याका स्थानिय मिडीयालाई बताए। “पि नेशन म्युजिक कम्पनीमा आवध्द भइ यसको एउटा गायक हुन पाउँदा एक’दमै खुशी लागेको छ। तर आज हासिल भएको रेकर्डले म एउटा गायक तथा र्यापर भएको र मैले फेरि नयाँ गीत लिएर आउनुपर्छ भन्ने कुराको अवगत भएको छ।” साइले सन्चार’कर्मीहरुलाई बताए।
यो गीत बनेर रि’लिज भएपछि विश्व संगितमै हलचल ल्याइदिएको थियो। यसले बिलबोर्ड हट १०० मा नम्बर २ स्थान समेत हाँ’सिल गर्न सफल भएको थियो। यसले कोरियाको चार्ट रेकर्ड’मा पनि नम्बर १ स्थान लिन सफल भएको थियो तर गतब’र्ष बिटिएसको ‘डाइनामाइट’ ले उनसको स्थान लि’एको थियो।
यो भिडियो सन २०१२ मा युट्युबमा रिलि’ज भएको थियो। यसले त्यतिबेला विश्वमै पहिलो’पटक १ अर्ब युट्युब भ्यु पाउने पहिलो भिडियोको स्थान लिन सफल भएको थियो। त्यसैगरी यो गीतले मात्र १६१ दिनमा १० अर्ब भ्यु यु’ट्युबमा पाएको थियो।
साइ सन २००१ मा एल्बम ‘साइ फ्रम द साइको वर्ल्ड’ सहित कोरियाली गीत संगित’को क्षेत्रमा आएका थिए। त्यसपछि उनले केहि हिट गीतस’हितका एल्बमहरु ल्याए। उनले सन २००१ मा ‘बर्ड’, सन २००२ मा ‘च्याम्पियन’ तथा सन २०१७ मा ‘आइ लभ इट’ नामका गीत एल्बमहरु ल्या’एका थिए। उनले सन २०१८ मा ‘पी नेशन’ नामको म्युजिक कम्पनी स्थापना गरेका थिए। उनले यो म्युजिक कम्पनी जेसी, ह्युना र हेज जस्ता गायकह’रुसँग मिलेर खोलेका हुन्। – इताजा खबरबाट
उनको यो गीत हेर्न तल क्लिक गर्नुस
November 28, 2020 admin समाचार 6197
हेर्नुस् कलाकार बखतेको मृ`त्युपछि भाईरल भएका टिकटकहरु (भिडियो सहित)
August 21, 2021 admin समाचार 2532
बखते दाइ तपाईं मृ त्युको यो समाचार लेख्दै गर्दा हात कापि रहेको छ ,मुटु पोलिरहेको छ ,जे नहुनुपर्ने आखिर त्यहि नै भएको छ । आफ्नै आमाको मृ त्यु भएको सात दिन मात्रै भएको थियो ,बखते
February 21, 2021 admin समाचार 3839
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (220450)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (212109)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (211808)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (210555)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (209342)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (208464)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (206941)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (206730)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (175639)